I-T Shirt yamadoda, i-T-Shirt yamadoda, i-T-Shirt yabasetyhini, ihempe yekotoni-umbono
Siphantse sibe neminyaka eli-10 yamava ukunceda abathengi bethu ngeemfuno zesinxibo sophawu.
Umgangatho yinkcubeko yethu, ikwinto ephambili kuthi. Sisoloko sizingisa kumgaqo "uMthengi wokuqala, uMgangatho oPhambili".
Sineqela loyilo leengcali, sinokukunceda uzobe umfanekiso wesiphumo ngokwentelekelelo yakho.
Custom yesikolo ofisi iyunifom iqhosha iqhosha cust ...
Ihowuliseyili siko zokwazisa cheap ebalekayo 100 ...
Umxube wabasetyhini abathathu be-50% ye-polyester 25% ...
ukuprinta okuqhelekileyo okungenanto kweepolyester ebaleka ihempe yelogo
Custom screen yoshicilelo plain akukho brand amadoda ethambileyo bas ...
I-Nanchang Vision Garment Co, Ltd. ibekwe kwisixeko saseNanchang, kwiphondo laseJiangxi, China. Sineefektri zethu zempahla kunye nomzi-mveliso wokushicilela, phantse iminyaka eli-10 yamava ukunceda abathengi bethu ngeemfuno zesinxibo sabo sophawu, ukunikezela ngemfano yokufeketha, uphawu lwedijithali yesiko, ushicilelo lokuhambisa ubushushu, ukuthambisa kunye nokushicilela kwesilika. Umgangatho yinkcubeko yethu, ikwinto ephambili kuthi. Sisoloko sizingisa kumgaqo "uMthengi wokuqala, uMgangatho oPhambili".
Custom siko 100% ipholiyesta ukufuma wickin ...
kwizinga eliphezulu abantwana abantwana iyunifomu umqhaphu piq ...
Ihowuliseyili sweatshi ihempe yabantwana ...
Isakhiwo iFangda Shang Shang, esingu-888, i-Chuangxin yokuqala yendlela, indawo ye-Gaoxin, isithili seQinshanhu, i-Nanchang, i-Jiangxi, e-China
Imveliso yeMarathon yesiqhelo kunye nezixhobo
Xa kuziwa kwimizamo yokunceda kunye neminyhadala, ii-marathons zezona zikhetho ziphambili. Umdyarho weembaleki uvumela iimbaleki ukuba zibonise amandla, amandla kunye nokuzinikela kwabo ...
Yintoni impahla yokhuselo yelanga? Ngubani ...
Ukuba ungumhambi oselunxwemeni osebenzayo, isurfer okanye usana lwamanzi, kunokwenzeka ukuba ukhalaze ngokuba kufuneka uthambise i-sunscreen ngalo lonke ixesha ujika. Emva kwayo yonke loo nto, kuyacetyiswa ...
Yintoni ilaphu le-triblend? Kutheni le nto ...
Kutheni ihempe yetriblend ishushu kakhulu? Xa umthengi wam efuna ingcebiso ngokukhetha izinto zokwenza ihempe eqhelekileyo, ndiqinisekile ukuyicebisa. Ukuba ubungandibuza ukuba kutheni, bendizokuxelela ukuba tr ...